Odoyaal eedeeyay maamulka Kismaayo - BBC Somali
Odoyaal eedeeyay maamulka Kismaayo
Image caption Magaalada Kismaayo waxa al-Shabaab xoog uga saaray ciidanka Kenya oo ay la socdeen maliishiyo Soomaali ah
Odoyaal uu ku jiro suldaanka Beesha deegaanka Buulo Abliko ee magaalada Kismaayo, ayaa ku eedeeyay maliishiyooyin taageera maamulka hadda gacanta ku haya Kismaayo inay dumiyeen guryo ku yaallay xaafaddaas.
Odoyaashu waxa ay ku eedeeyeen in rag hubeysan oo ay xoog ku burburiyeen guryo badan oo ku yaallay xaafad ka tirsan magaalada oo ay sheegeen in dadkii ku jiray halkaasi qasab looga saaray oo qaarkoodna la garaacay.
Waxaa ay sheegeen inay doonayaan maliishiyada inay dadka barakiciyaan oo ay degaan ka dhigtaan xaafadda oo sida ay sheegeen burburinteeda loo isticmaalay cagaf-cagafyo.
Mid ka mid ah odoyaashaasi oo la yiraahdo Injineer Xuseen Dhaqane Yarow oo BBC u warramay ayaa sheegay in ay u muuqato in maamulka magaalada raali ka yahay arrinta.
Dhinaca kale maamulka Kismaayo ayaa beeniyay eedeynta oo au ku tilmaameen mid aan waxba ka jirin.
Guddoomiyaha degmada Kismaayo, Cabdullaahi Cabdi Yusuf, oo ay BBC weydiisay waxa uu sheegay inay yihiin dad maamulkiisa ka soo horjeeda oo been ka faafinaya, laakiin ay jiraan dhul banaan oo la isku heysto oo uu sheegay in taasina ay maxkammad hawsheeda ku jirto.
Ma ahan markii ugu horreysay ee dadka deegaanku ay ka cawdaan maamulka magaalada Kismaayo tan iyo markii ay ciidanka Kenya ka saareen al-Shabaab Kismaayo.